I-China N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA,) CAS NO. Umatshini we-103-83-3, BDMA kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
Igama lorhwebo: BDMA
Iipropathi kunye nokusetyenziswa:
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) kushishino lyu, yinto eyinxalenye polyester polyurethane block amagwebu ethambileyo, lyu amagwebu ngqongqo, sheet lyu kunye yokuncamathelisa ngcina.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) isetyenziselwa ikakhulu amagwebu angqongqo, anokwenza i-polyurethane foam ibe ne-fluidity kwangoko kunye neeseli ezifanayo, kunye nokubambelela okuhle phakathi komzimba kunye ne-substrate.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) kwicandelo lokudityaniswa kwezinto eziphilayo, isetyenziswa ikakhulu njengezinto ezincedisayo, i-corrosion inhibitors, i-acid neutralizers, kunye nokukhawulezisa ukushumeka izilayi ze-elektroni zemicroscopy kumachiza e-organic ekudibaneni kwe-dehydrohalogen.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) Isetyenziselwa ukuhlanganisa iityuwa ze-ammonium ze-quaternary, ukuvelisa indawo ye-cationic esebenzayo kunye nenamandla yokubulala ukungunda, njl.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) ngokwe-epoxy resin, ubukhulu becala isetyenziselwa ukukhuthaza iinkqubo zokunyanga ezinjenge-acid anhydrides, i-polyamides, kunye nee-amine ezinamafutha ukukhawulezisa ukuphilisa imveliso. Isetyenziswa ngokubanzi kwimpahla yokubumba ye-epoxy, izinto zokubopha, izinto zokwenza i-epoxy floor, kunye nepeyinti zaselwandle.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) imizekelo yesicelo ekhethekileyo ibandakanya: i-carbon fiber / i-monomolecular epoxy resin-based composite laminates, i-electrophoretic coatings ye-epoxy substrates, kunye ne-dry-type transformer potting glue.
Iphakheji kunye nokugcinwa:
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) ipakishwe kwi-180 kg / igubu, ligcinwe kwindawo epholileyo, engenisa umoya ngaphakathi ezindlini, ekhuselweyo ukufuma kunye nokuvezwa lilanga, kwaye ixesha lokuzigcina ziinyanga ezili-12.
N, N-dimethylbenzylamine (FENTACAT BDMA, Dabco BDMA) yimichiza yokuhlanganiswa kwezinto eziphakathi. Nceda uphephe ukudibana namehlo kunye nolusu ngexesha lokusebenzisa. Ukuba kukho unxibelelwano, nceda uhlambe ngamanzi kwaye uthumele kugqirha ukuze afumane unyango.